नेपालबाट क्रिटिकल केयर मेडिसिनमा डीएम गर्ने पहिलो डाक्टर « Nepal Health News
२०७५, १८ पुष बुधबार ०४:३७ मा प्रकाशित
डा. प्रमेश सुन्दर श्रेष्ठ नेपालबाट उत्पादन भएको पहिलो डीएम गर्ने क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ हुनुहुन्छ । डा. हेमराज पनेरु र डा. निरज कयालले भर्खरै मात्र क्रिटिकल केयरमा डिएम सक्नुभएको छ भने डा. सौरभ प्रधान, डा. सुनिल पाठक र डा. शुभ कल्याण श्रेष्ठ अध्ययनरत हुनुहुन्छ ।
शिक्षण अस्पतालमा डिएमको क्रिटिकल केयरको अध्ययन हुन थालेको ५ वर्ष भयो । यो स्पेसलाइज्ड विषय भएकाले यसको क्राइटेरिया फरक हुन्छ । त्यसकारण वर्ष एक दुइमात्र डाक्टर लिइन्छ ।
त्रि.बि. शिक्षण अस्पतालमा शुरु गरिएको क्रिटिकल केयरमा डिएम कार्यक्रमबाट बार्षिक धेरै बिद्यार्थिले बार्षिक रुपमा अध्ययन गर्न सकेका छैनन् । पाँच वर्षको अवधिमा ६ जनाले मात्र क्रिटिकल केयरमा डिएम गर्न सफल भएका छन् । सन् २०१३ बाट त्रि.बि.शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा क्रिटिकल केयर मेडिसिनमा डिएम कोर्षको अध्ययन शुरु गरिएको थियो ।
त्रि.बि. शिक्षण अस्पतालमा शिक्षण अस्पतालले वार्षिक तीनहजार देखि तीन हजार पाँच सय भन्दा बढी बिरामीलाई आई.सि.यू.सेवा दिदैँ आएको छ । त्यसमा डा. श्रेष्ठको विगत ३ वर्षदेखि प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको छ । यहाँ ५५ वटा क्रिटिकल केयरका विभिन्न वेड रहेका छन् ।
ॐ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरमा ८ सयदेखि १२ सयसमम आई.सी.यू.का बिरामीलाई उहाँले सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएको छ । यो अस्पतालमा २३ वटा सुविधासम्म आई.सी.यू वेड रहेका छन् ।
शिक्षण अस्पतालमा क्रिटिकल केयर मेडिसिन सेवा लिन आउने बिरामीको मृत्युदर रहेको पाइन्छ । यसको प्रमुख कारण प्रायः गम्भीर प्रकारका बिरामी रिफर भएर आउने भएकाले नै हो ।
त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल महराजगञ्जका असिस्टेन्ट प्रोफेसर डा. प्रमेश सुन्दर श्रेष्ठ नेपालबाट क्रिटिकल केयर मेडिसिनमा डीएम गर्ने पहिलो इन्टेन्सिभिष्ट चिकित्सक हुनुहुन्छ । सन् २०१३ मा रोयल कलेज अफ क्यानडाको समन्वयमा त्रि.बि.शिक्षण अस्पतालमा शुरु गरिएको क्रिटिकल केयर मेडिसिनको डीएम कोर्ष गर्ने डा.श्रेष्ठ पहिलो विद्यार्थी हो । उहाँ चावहीलस्थित ॐ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरमा क्रिटिकल केयर युनिटको प्रमुखसमेत हुनुहुन्छ । क्रिटिकल मेडिसिनबारे डा. श्रेष्ठ के भन्नुहुन्छ ? आउनुस् जानौं ।
दुर्घटनाबाट शरीरका विभिन्न महत्वपूर्ण अंगहरुमा चोट (पोलिट्रमा) र विभिन्न रोगको अत्यधिक संक्रमणले मानिसलाई क्रिटिकल केयर युनिटमा पुर्याउन सक्छ । नेपाललगायत दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरुमा संक्रमण नै प्रमुख समस्या हो । जस्तोः फोक्सोको संक्रमण, आन्द्राको संक्रमण आदि । नेपालका कतिपय ठाउँहरुमा सिटामोल खाएर ज्वरो कम गर्दै बसेका बिरामीहरुमा संक्रमणले च्यापेको धेरै उदाहरणहरु पाइन्छ । यस्ता बिरामीहरु पिसाब कम हँुदै गएपछि र विभिन्न अंगमा असर गर्न थालेपछि मात्र अस्पताल आउने गर्छन् । संक्रमण शरीरभर फैलिसकेको र धेरै अंगमा असर गरिसकेको अवस्थामा रगतको प्रेसर कम भई चेतना समेत गुमिसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थाका बिरामीलाई तुरुन्त आई.सी.यू.मा भर्ना गरेर कडा एन्टिबायोटिक दिनुपर्छ । कतिपय बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार शुरु गर्नुपर्छ ।
सबै आई.सी.यू. एक नासका हँुदैनन् । आई.सी.यू.को पूर्वाधार, अत्याधुनिक प्रविधि र जनशक्ति (डाक्टर, नर्स) को आधारमा कति सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा निर्भर हुन्छ ।
बिरामीलाई आई.सी.यू.मा राखेपछि उपचार गर्न गाह«ो हुन्छ कि भन्ने धेरै बिरामीका आफन्तको सोच हुन्छ । तर वास्तवमा यो गलत हो बिरामीको रोगको जटिलताको आधारमा बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ । जस्तोःनसा सम्बन्धी रोगका बिरामीलाई १० देखि १२ महिना सम्म पनि आई.सी.यू. मा राखेर सामान्य जीवनमा फर्काउन सफल भएका छौं । भेन्टिलेटरमा राख्ने बिरामीको अवस्था सिकिस्तै हुन्छ । बिरामीलाई कृत्रिम स्वासप्रश्वास मेसिनमा नराखी समाधान हुन नसक्ने अवस्था भएपछि भेन्टिलेटरमा राखिन्छ । यस्ता बिरामीको मृत्यदर बढि हुन्छ ।
ॐ हस्पिटलको क्रिटिकल केयर
यस हस्पिटलको क्रिटिकल केयर युनिटमा डा. प्रमेश सुन्दर श्रेष्ठको नेतृत्वमा २४ सै घण्टा क्रिटिकल केयरको तालिम प्राप्त एमडी तहका डाक्टर र मेडिकल अफिसरको व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसबाहेक भेन्टिलेटरमा राखिएको एक जना बिरामीका लागि एक नर्स र भेन्टिलेटरमा नभएका २ जना बिरामीका लागि एक जना नर्सको व्यवस्था छ । अस्पतालका हरेक वेडमा अत्याधुनिक भेन्टिलेरको सुविधा उपलब्ध छ । यसका साथै क्रिटिकल केयरमा रहेका बिरामीका लागि साधारण र सिकिस्त बिरामीका लागि स्लिड डायलाईसिसको सुविधा छ जुन नेपालका केही ठाउँमा मात्र उपलब्ध हुन्छ । यहाँ अत्याधुनिक ब्लड ग्याँस मेसिन छ । सबै ल्याबहरु कम्प्युटराइज्ड छन् । यो मोनिटरमा सबै देखाउँछ । आइसियुमा भएका बिरामीले के खाने के नखाने हेर्न एक जना डाइटिसियन राखिएको छ । आइसियुमा भएको बिरामीको लागि फिजियोथेरापी सेवा उपलब्ध छ । हरेक बिरामीलाई दिनमा दइचोटि काउन्सिलिङको सुबिधा उपलब्ध गराइन्छ । ओम अस्पतालमा बिरामीको मृत्युदर ८ देखि १२ प्रतिशत मात्र छ ।